Justin Bieber & Kourtney Kardashian: Miyey Isla Nool Yihin? - Hablaha Media Network
Justin Bieber & Kourtney Kardashian: Miyey Isla Nool Yihin?
HMN:- Sida ey qorayeen wararka, Justin Bieber iyo Kourtney Kardashian aya weli xeriirkoda socda. Xeriirkoda aya sida ey horey usheegen Justin iyo Kourtney iney yihin saaxibo caadi ah oo is garab istaago markey isu baahdan, ayaa warbaahinta sheegeysa xeriirkoda inu weji cusub yeeshey.
Shabakada Radar Online ayaa qoreysa in labadan shaqsi ey isla nool yihin. Wararka ayaa intaasi ku darey in sariirta ey ugu yaran habeen walbo wadaagan. “Waxey wadaagan caddeyga waana wadaag midkii ugu dambeeyay. Waa lamaane aan kala harin. Dadka aya is weydiinaya iney madooben.”
Wararka ayaa intaasi ku dareen in marka ey kala maqan yihin ey telefoonka kaxariiran. “Marka ey hal meel wada joogin Justin iyo Kourtney mobeelka ayey kawada xariiran. Waxey u dhaqmaan sida lamaane. Hadey hal magaalo wada joogan, guriigisa ayey aada ama Justin aya guriga Kourtney aado.”
Sheekada romansiga dhex mareyso Justin iyo Kourtney aya aad ugubeyso Scott Disick, Kourtney seygeeda hore oo ey caruurta u dhashey.
Scott Disick wuxuu uu aad ooga caroonaya in Justin uu kala wareego aabanimada qoyskiisa hore. Lamaanahan aya xeriirkoda bulshada usoo bandhigin. Marki la weydiiye dareenkisa Scott Disick ayaa wax jawab ka bixinin wararka lala xariirinayo xaaskiisa hore.